Ruushka: Ciyaartooy badan ayaa Rio nooga qeybgalaya - BBC News Somali
Ruushka: Ciyaartooy badan ayaa Rio nooga qeybgalaya
Ruushka ayaa sheegay in ciyaartooy badan ay ku metali doonnaan ciyaaraha Rio 2016
Gudiga Olimbikada ee Ruushka ayaa sheegay in inta badan ciyaartooydooda loo ogolaaday in ay ka qeyb qaataan ciyaaraha Rio maanta ka furmaya.
Gudiga ayaa xaqiijiyay in 271 ka mid ah 387 ciyaartooy oo dalkaasi matali lahaa loo fasaxay in ay ka qeyb qaataan tartamada olimbikada ee sanadkan ka dhacaya Rio, halka 5 kalana ay sugayaan go'aanka kama dambeysta ah.
Gudoomiyaha gudigaasi, Alexander Zhukov, ayaa sheegay in Ruushka uu hadda leeyahay ciyaaryahannada ugu "hufan" ee ciyaaraha Rio 2016.
Hay'adda caalamiga ah ee la dagaallanka dawooyinka jirka ciyaartooyda xoojiya, WADA, ayaa horay ugu talisay in ciyaarahan laga mamnuuco dhammaan ciyaartooyda Ruushka, ka dib markii la ogaaday in dowladda dalkaasi ay ku lug lahayd adeegsiga dawooyinka mamnuuca ah.
Goor sii horeysayna, madaxa gudiga caalamiga ah ee olimbikada, Thomas Bach, ayaa sheegay in ciyaartooya dawooyinka mamnuuca ah adeegsada ee ku sugan Rio, aanay heli doonin meel ay ku dhuuntaan.
Bach ayaa sheegay in kumannaan baaritaan lagu samayn doono ciyaartooyda inta ay socdaan ciyaaraha, dhacaanka laga qaadana ay keydin doonaan ilaa 10 sano, si aanay xorriyad u dareemin kuwa dawooyinkaasi adeegsada.